Barcelona oo qorsheyneysa inay lasoo saxiixato weeraryahan ka tirsan Manchester United – Gool FM
Chelsea oo horumar badan ka sameysay wada-xaajoodka heshiis kordhinta ee xiddig bartilmaameed u ah Real Madrid iyo PSG
Liverpool oo diyaarineysa dalab ay Juventus kaga dooneyso inay kaga soo qaadato Paulo Dybala
Ronaldo oo uu saddexda sare ka reebay, Messi oo uu kaalinta u dambeysay geliyay & Erling Haaland oo doortay saddexda laacib ee ugu wanaagsan xilligan aragtidiisa
Neymar oo dib u bilaabay soo kabashadiisa wajiga gudaha garoonka… (Miyuu taam u noqon karaa kulanka Real Madrid?)
“Haddii uu kooxda sii joogo, ma ciyaari doono” – Xavi Hernandez oo go’aan cad ka istaagay xaaladda Ousmane Dembele
Wakiilka Dembélé oo xiriir la sameeyay mid ka mid ah kooxaha waaweyn ee Yurub
Saddex ka mid ah Kooxaha waa weyn ee horyaalka Premier League oo ku loollamaya saxiixa Youri Tielemans
Neymar Jr oo sharraxay sababtii uu ugu laaban rabay naadigiisii hore ee Barcelona xagaagii 2019
Man City oo Dhammeystirtay saxiixa xiddig bartilmaameed u ahaa Man United iyo Liverpool… (Ogow qiimaha ay kula wareegeyso iyo xilliga uu Etihad imaanayo)
Sadio Mane oo isbitaalka loo qaaday kaddib jug xun oo kasoo gaartay ciyaartii uu xalay xulkiisa Senegal garaacay Cape Verde
Barcelona oo qorsheyneysa inay lasoo saxiixato weeraryahan ka tirsan Manchester United
Dajiye November 26, 2021
(Barcelona) 26 Nof 2021. Wargeysyada Spain ayaa sheegay in maamulka Barcelona ay wadahadalo degdeg ah la galeen Manchester United si ay ula soo saxiixdaan Edinson Cavani, weeraryahanka Red Devils, inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga jiilaalka.
Edinson Cavani ayaa kaga nool Manchester United waqtiyo aan wanaagsaneyn, sababa la xiriira inuusan ka qeyb galin inta badan kulammada kooxda, kaddib markii ay United la saxiixatay xilli ciyaareedkan halyeyga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo.
Ilaa hadda, Edinson Cavani ayaa Manchester United kala qayb galay 270 daqiiqo oo kaliya, taas oo keentay in laacibka uu ka fikiro inuu tijaabiyo khibrad cusub oo ah meel ka baxsan Manchester United.
Shabakadda Fichajes ee dalka Spain ayaa muujisay in Barcelona ay doonayso inay heshiis la gasho Edinson Cavani, oo ay hadda kala xaajoonayaan Manchester United si ay ugu oggolaadaan inuu baxo inta lagu jiro suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee bisha January.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in Barcelona ay u baahan tahay inay la soo wareegto weeraryahan cusub, gaar ahaan kadib markii la sheegay in laacibka reer Argantina ee Sergio Aguero uu qabo dhibaatooyin caafimaad ee dhanka wadnaha ah oo ka dhigi doona inuu ka fariisto gabi ahaanba ciyaarista kubadda cagta.
Shabakadda Fichajes ayaa intaa ku dartay in Barcelona ay diyaar u tahay inay Edinson Cavani la soo wareegto muddo lix bilood ah ilaa dhammaadka xilli ciyaareedka, iyadoo ay suurtogal tahay inay xilli ciyaareed kale ku darsato.
Halyeey kooxda Rangers ah oo is bar-bardhig xiisa leh ku sameeyay Messi iyo Ronaldo
Haaland oo doortay kooxdiisa cusub kaddib marka uu ka tago Borussia Dortmund